Mma Archives - TELES RELAY
Àgwà ọma Kwụsị ịdị arọ receipts Usoro ọgwụgwọ Mmekọahụ na mmekọrịta elekọta
Na Brazil enwere ọmarịcha mma na slum - Video
Ruo ugbu a, ụdị ndị kachasị elu nke Brazil na-esitekarị na mpaghara dị elu ma ọ bụ site na nzụlite nwere ikike. Ma, maka ndị si na slum pụta, ọ na-esiri ha ike ịnweta ikpo okwu. Ndị na-achụ nta ihe nlereanya anaghị anwa anwa ...
Miss France 2021: Justine Dubois, hoputara Miss Poitou-Charentes!
ALEXIS WAYAN	 August 31, 2020 0
ỌRT. Na Satọde a, Ọgọstụ 29, a họpụtara Justine Dubois Miss Poitou-Charentes 2020. Na-esote Disemba, nwa agbọghọ nke 24 ga-anọchite anya mpaghara ya na asọmpi mba na-enwe olileanya nke mmeri okpueze Miss France. Nke a…
Miss France 2020: ewepu onye ochichi, maka ibuso agha megidere ara ure
Chinde	 August 25, 2020 0
Ruo mgbe iwu ohuru ahụ, asọmpi ahụ anaghị ekwe ka foto gba ọtọ, ọbụlagodi ihe kacha mma. Anaëlle Guimbi kwuru, sị: “M ga-anọgide na-agbachitere ụkpụrụ m hụrụ n'anya. Ihe nlere anya a, akwukwo ...
5 echiche na - abaghị uru nke gbochiri gị inwe ụdị ejiji
Chinde	 August 24, 2020 0
Ndị a bụ nkwenkwe ụgha 5 maka gị nke na - egbochi gị inwe ụdị? Ndị na-egbochi gị ịchọta ụdị gị na n'ikpeazụ iji ejiji nke ọma? 1) Kwere na ịke bu pụta ụwa. Agwala m agwa gị otu okwu banyere ya: ...
5 Ndụmọdụ iji kwalite idozi akụkụ gị
ịke abụghị ihe ebum pụta ụwa, ọ nwere ike mụta. Anyị ahọrọla ndụmọdụ 5 maka ịkwalite akụkụ gị ma mee ka onye ọ bụla hụrụ gị gafere. Enweghị n'ihu ado, ka na-amalite na mbụ n'ọnụ: # Kwụsị…
Omume ndị kachasị mma iji nwee mmado nrọ
bryanekobe	 August 16, 2020 0
Omume kachasị mma iji nwee nrọ Buttocks Nwere nchara nchara, anyị na-etinye ihe omume 5 ndị ​​a n'ọrụ egwuregwu gị! Ike gwụrụ nke igosipụta isi ike mgbe ị na-eje ije na akwa mmiri gị n'ụsọ osimiri ma ọ bụ ...
3 super irè Atụmatụ ọgụ megide gbatịa akara
3 super irè ndụmọdụ iji lụsoo mgbatị akara Anyị edepụtara ụzọ atọ kachasị dị mma iji lụ ọgụ megide mgbapụ! Zute n'okpuru. N'oge na-adịbeghị anya, anyị tụrụ aro ka ị chọpụta atụmatụ anyị ...
Onye Cameroon Imane Ayissi bụ onye okike izizi nke sub-Sahara Africa ime ngagharị kwa izu ...
Chinde	 August 12, 2020 0
Dabere na Paris ruo afọ iri atọ, Cameroonian Imane Ayissi mere akụkọ ọdịnala na Jenụwarị 23 site na ịbụ onye mbụ na-ese ihe site na sub-Sahara Africa iji mee njem na Paris Haute Couture Week. Amụrụ…
Ejiri edozi isi nke Africa na-amaliteghachi site na ANGE EKA
N'ịbụ onye a maara maka mmụọ okike ya na ichepụta echiche ya, a na-akọwakarị onye na-ese ihe ahụ dị ka nke ime mmụọ na oke oke. Ma dika o tinyere ya nke oma, o kpebiri ime ntutu, ihe o choro. Angel EKA, ...
1 2 esote